Samsung က Galaxy S10 မှာ အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံး ထည့်သွင်းမလား? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Samsung က Galaxy S10 မှာ အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံး ထည့်သွင်းမလား?
Samsung က Galaxy S10 မှာ အနောက်ကင်မရာ သုံးလုံး ထည့်သွင်းမလား?
Samsung က လာမယ့်နှစ်မှာ မိတ်ဆက်မယ့် Galaxy S10 Series များမှ အနည်းဆုံး မော်ဒယ်တစ်ခုမှာ အနောက်ကင်မရာသုံးလုံး ထည့်သွင်းဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ KB Securities ရဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူ Kim Dong-Won က ပြောပါတယ်။ သူက Galaxy S9 Series များဟာ Galaxy S8 Series များထက် များစွာ တိုးတက်မှု မရှိတာကြောင့် ရောင်းအားဟာ ထင်ထားတာထက် နည်းပါးနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
Galaxy S10 မှာ အနောက်ကင်မရာသုံးလုံး ထည့်သွင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ထူးခြားတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆမ်ဆောင်းက ဒီလို ပြုလုပ်ချင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းဟာ သူ့ရဲ့ နောက်ထုတ်မယ့် Phablets များမှာ Apple iPhone X ရဲ့ အရှေ့ကင်မရာလို 3D Camera များထည့်သွင်းပေးဖို့လည်း စဉ်းစားနေပါတယ်။
အသေးစိတ်ပုံရိပ်များကို ဖမ်းယူပေးနိုင်တဲ့ ကင်မရာ အတွဲအစပ်များဟာ ဆမ်ဆောင်းရဲ့ အဓိက အာရုံစိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ အတွင်းသတင်းများအရ ဆမ်ဆောင်းဟာ Galaxy S10 နဲ့ Galaxy S10 Plus များမှာ အဲဒီလို ကင်မရာ အတွဲအစပ်များ ထည့်သွင်းထားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းဟာ Galaxy S10 Series များမှာ 3D Camera များ ထည့်သွင်းဖို့အတွက် အစ္စရေး အခြေစိုက် Mantis Vision Company နဲ့ ပူးပေါင်းနေပါတယ်။
Display Notch မပါဘဲ အဲဒီ ကင်မရာများကို ထည့်သွင်းမယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ကင်မရာသုံးလုံးတပ်စနစ်ကို Huawei P20 Pro မှာ တပ်ဆင်ထားပြီး DxOMark ရဲ့ စမ်းသပ်မှုမှာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဖုန်း ကင်မရာအဖြစ် စာရင်းဝင်နေပါတယ်။
Samsung က Galaxy S10 မှာ အနောကျကငျမရာ သုံးလုံး ထညျ့သှငျးမလား?
Samsung က လာမယျ့နှဈမှာ မိတျဆကျမယျ့ Galaxy S10 Series မြားမှ အနညျးဆုံး မျောဒယျတဈခုမှာ အနောကျကငျမရာသုံးလုံး ထညျ့သှငျးဖို့ စဉျးစားနတေယျလို့ KB Securities ရဲ့ ခှဲခွမျးစိတျဖွာသူ Kim Dong-Won က ပွောပါတယျ။ သူက Galaxy S9 Series မြားဟာ Galaxy S8 Series မြားထကျ မြားစှာ တိုးတကျမှု မရှိတာကွောငျ့ ရောငျးအားဟာ ထငျထားတာထကျ နညျးပါးနတေယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။
Galaxy S10 မှာ အနောကျကငျမရာသုံးလုံး ထညျ့သှငျးပေးခွငျးအားဖွငျ့ ထူးခွားတိုးတကျလာမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဆမျဆောငျးက ဒီလို ပွုလုပျခငျြနတော ဖွဈပါတယျ။ ဆမျဆောငျးဟာ သူ့ရဲ့ နောကျထုတျမယျ့ Phablets မြားမှာ Apple iPhone X ရဲ့ အရှကေ့ငျမရာလို 3D Camera မြားထညျ့သှငျးပေးဖို့လညျး စဉျးစားနပေါတယျ။
အသေးစိတျပုံရိပျမြားကို ဖမျးယူပေးနိုငျတဲ့ ကငျမရာ အတှဲအစပျမြားဟာ ဆမျဆောငျးရဲ့ အဓိက အာရုံစိုကျမှုတဈခု ဖွဈနပေါတယျ။ အတှငျးသတငျးမြားအရ ဆမျဆောငျးဟာ Galaxy S10 နဲ့ Galaxy S10 Plus မြားမှာ အဲဒီလို ကငျမရာ အတှဲအစပျမြား ထညျ့သှငျးထားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဆမျဆောငျးဟာ Galaxy S10 Series မြားမှာ 3D Camera မြား ထညျ့သှငျးဖို့အတှကျ အစ်စရေး အခွစေိုကျ Mantis Vision Company နဲ့ ပူးပေါငျးနပေါတယျ။
Display Notch မပါဘဲ အဲဒီ ကငျမရာမြားကို ထညျ့သှငျးမယျလို့ ထငျရပါတယျ။ ကငျမရာသုံးလုံးတပျစနဈကို Huawei P20 Pro မှာ တပျဆငျထားပွီး DxOMark ရဲ့ စမျးသပျမှုမှာ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံး ဖုနျး ကငျမရာအဖွဈ စာရငျးဝငျနပေါတယျ။
Previous articleGalaxy S9 Plus ရဲ့ ကင်မရာထက် ပိုကောင်းမယ့် Galaxy Note 9
Next articleNotch ပါတဲ့ Xiaomi Mi A2 Lite ထွက်လာမလား ?